सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउदाँ यस्ता असर हुन सक्छ । सावधान - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउदाँ यस्ता असर हुन सक्छ । सावधान
के तपाइँ सुत्ने बेलामा मोबाइल चलाउने बानि छ ? एदी छ भने आजै कम गर्नुहोस कृपया पुरा पढी जनचेतनाको लागि आफ्ना साथि आफन्तजन लाइ सेयर गर्नुहोला !
आजभोली हामि मोबाइल को पर्योग धेरै नै गर्छौ चाहे सुत्ने बेला होस् या अरु बेला मोबाइल हामि धेरै नै पर्योग गर्छौ तर मोबाइल धेरै पर्योग गर्नु स्वास्थ्य को लागि र आखाको लागि एकदमै नराम्रो हो ! मोबाइल एउटा अति आवस्यक चिज हो तर एसको सदुपर्योग गर्न जनिएन भने हाम्रो स्वास्थ्य लाइ असर गरिरहेको हुन्छ
आँखामा प्रेशर :
ध्यान दिन नसक्नुः